Hot sale Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy varotra mafana China
nd yag 1064nm lava pulsa 755 nm fanesorana volo laserandrandrite
Fitsaboana Therapy Alexandertite Laser Hair Removal 755nm dia nanolo-tena ho amin'ny fenitra volamena amin'ny fanesorana volo, noho ny fidiran'ny melan mahomby, ary ny vokadratsiny kely kokoa. Ny Alexanderite Laser Hair Removal 755nm dia mifototra amin'ny fitsipiky ny hazavana sy ny hafanana mifantina, amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny angovo laser sy ny sakan'ny pulsa, ny laser dia afaka miditra amin'ny hoditra hahatratra ny fololon'ny volo, ary ny angovo laser dia tafiditra ary avy eo novain'ny hafanana. taovolon'ny volo, ka ny hai ...
Triple wavelength 755 808 1064 milina fanesorana volo laser
1.360 ° Screen Screen Touch azo ovaina miaraka amin'ny LED mahatalanjona manodidina. 2. AlexMED ihany no miaraka amin'ny Casters / Rollers eo anelanelan'ny endrika ambony latabatra Diode ambony latabatra voalohany miaraka amin'ny Casters / Rollers ho an'ny Lady's Easier Moving. 3.Trio Clustered 755 + 808 + 1064nm miaraka amin'ny fandrakofana avo indrindra. 4.Miorina manan-tsaina indrindra miaraka amin'ny Trio Clustered Diode. MISY PLATFORMANA MAHERY SY MAHASOA AZON'ANDRIAMANITRA TRIO CLUSTERED! Inona ny maha samy hafa ny 3 halavan'ny 755nm 808nm 1064nm 755nm Wavelength Ny halavan'nyAlexandrite manao azy ...
Vokatra asongadina, Sitemap, Laser Epilator Ipl, Esory ny fanesorana volo amin'ny Shr Ipl, Diode fanesorana volo laser amin'ny trano, Jiro Flash Ipl Xenon, Laser Module 808, 3 amin'ny 1 Ipl, Vokatra rehetra Room 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Distrikan'i Tongzhou, Beijing, Sina